अन्तराष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला शुरु - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
बाग्लुङ । गलकोट नगरपालिका–५ टेउवामा अन्तराष्ट्रिय आधुनिक मूर्तिकला कार्यशाला शुरु भएको छ । गलकोट कला प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यशालाको सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कलाका माध्यमबाट अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको चिनारी विस्तार गर्न कार्यशाला सहयोगी बन्ने धारणा राखे । “दश देशका मूर्तिकारले यहाँको सन्देश लिएर जानुहुनेछ, एक करोडमा नहुने प्रचार उहाँहरुले गरिदिनुहुन्छ”,
मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, “पर्यटन प्रवद्धनका हिसाबले पनि मूर्तिकला कार्यशालाको महत्व छ ।” विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकारका कलाकृति सङ्ग्रहित गर्न पाउनु गलकोटको मात्रै नभई देशकै गौरवको विषय भएको उनको भनाई छ ।
सङ्घीय व्यवस्थाकै कारण भौगोलिक हिसाबले विकट गाउँहरुमा विकास गतिविधि र सचेतनाको लहर बढेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उनले जनताको हित र मुलुकको समृद्धिका लागि सङ्घीय व्यवस्था ल्याइएको धारणा राखे । उनले आउँदो तीन वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई देशकै समृद्ध प्रदेश बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे
यही फागनु २१ गतेसम्म चल्ने कार्यशालामा १० विदेशीसहित १५ मूर्तिकार सहभागी छन् । मूर्तिकारलाई सघाउन नेपालका पाँच र भारतका पाँच गरी १० सहयोगी मूर्तिकार पनि कार्यशालामा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला मूर्तिकला सङ्ग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वप्राज्ञ एवं कार्यशाला मूल समारोह समितिका संयोजक मूर्तिकार ओम खत्रीले बताए । उनका अनुसार कलाकारले आजदेखि कलाकृति बनाउन शुरु गर्नेछन् ।
कलाकारले कार्यशालामा बसेर राजनीतिक दलका नेता, धार्मिक गुरु, देवीदेउता र आफ्नो देशको संस्कृति झल्कने मूर्ति कुँद्न पाउने छैनन् । मानव सभ्यता, वेषभूषा, प्रकृति आदि विषयमा प्रतिकात्मक मूर्ति बनाउनेछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि कार्यशालाका लागि तयारी अगाडि बढेको थियो । हालसम्म पूर्वाधार निर्माणमा रु ८६ लाख ९३ हजार खर्च भइसकेको छ । कार्यशाला सम्पन्न गर्दासम्म थप रु. एक करोड ४१ लाख ७८ हजार खर्च हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कार्यशालाको खर्च झण्डै रु. दुई करोड ३० लाख नाघ्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाले बताए ।
कार्यशालाका लागि गत आवमा सङ्घीय सरकारबाट रु ५० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ४० लाख बजेट छुट्टिएको थियो । गलकोट नगरपालिकाले पनि रु. तीन लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । नगरको बजेटबाट कार्यशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको थियो ।
चालू आवमा गण्डकी प्रदेश सरकारले रु. ३० लाख, प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रको बजेटबाट रु. १० लाख र प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा ‘सागर’बाट रु. पाँच लाख सहयोग प्राप्त भएको छ । यस्तै व्यक्तिगतरूपमा सहयोग जुट्ने क्रम पनि जारी छ ।
कार्यशालाका लागि स्थानीय कुलबहादुर बस्नेत, झङ्कबहादुर बस्नेत, मानबहादुर खत्री र टीकाकुमारी खत्रीले करिब रु. ३० लाख मूल्य बराबरको २३ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका छन् ।